September 2012 – democracy for burma
On September 30, 2012 October 2, 2012 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
Cox’s Bazaar, Sept 30 —A mob torched and vandalisedavillage of Buddhists in Cox’s Bazaar’s Ramu Upazila early on Sunday in one of the worst religious attacks in Bangladesh apparently triggered byaFacebook posting allegedly defaming the Quran.
UPDATE : https://democracyforburma.wordpress.com/2012/10/01/alert-religious-war-muslims-attack-burn-and-destroy-10-buddhist-temples-in-bangladesh-video-photos/
A local journalist, who was hiding with family in the neighbourhood that came under attack, toldbdnews24.com the Cheranghata Barakyang Temple close to his home was set alight. He said the flames died out around 2:45am.
Garry Kasparov,Russian pro-democracy activist praising DASSK-video speech
On September 30, 2012 October 1, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Director of Public Affairs for the Director of National Intelligence on the intelligence related to the terrorist attack on the U.S. Consulate in Benghazi, Libya.
On September 29, 2012 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
Statement 28.September 2012
Ma Su Su Nway :ထူးချွန်ဆုရ သင်တန်းသားတစ်ဦးကို ဂုဏ်ပြုဆု ချီးမြှင့်စဉ် …. ။
On September 29, 2012 September 29, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီနှင့်မဏ္ဍိုင် ဥပဒေအကယ်ဒမီတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော တောင်သူလယ်
ဥပဒေဆိုင်ရာ လက်တွေ့သင်တန်း၏ သင်တန်းဆင်းပွဲကို
ယနေ့(၂၈၊၉၊၂ဝ၁၂ နေ့) ညနေ ၃းဝဝ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊
မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း(ဘားလမ်း)ရှိ Mr.Brown Cafe ၌
အဆိုပါသင်တန်းကို ၂၆၊၉၊၂ဝ၁၂ နေ့မှ ယနေ့အထိ ရက်တို
တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင် ၅၇ ဦး
သင်တန်းခန်းမ တည်ရှိရာ ၃၁ လမ်းမှ၊
ဘားလမ်းထဲသို့ လမ်းလျောက်လာကြစဉ် …. ။
KIO implements Drug Destruction Plan
On the morning of September 26th the Kachin Independence Organization’s (KIO) Central Drug Destruction Group heldameeting with residents of Laizar to address the issue of drugs being produced in the area. “If we do not put an end to this drugs will destroy Kachin State, we need to make thisadrug free zone. We need to join hands with the local people and address this issue,” saidacentral military officer of the group.
The meeting was led by Lieutenant General GanShao, the leader of KIO’s Central Drug Destruction Group at KIO’s Laizar High School. In attendance were KIA (Kachin Independence Army) officers, students, Laizar residents, and refugees, totaling 2,417 people.
At the beginning of September KIO’s Central Drug Destruction Group worked withalocal youth group andalocal woman’s group to burn opium plants near Pansai (KyuKote) in the northern part of Shan State, and plan to continue the burning of plants in other areas. Continue reading “KIO implements Drug Destruction Plan” →
Daw Aung San Suu Kyi _Responsible citizen inafree society video-english
On September 28, 2012 September 29, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
should listen what she meant by beingaresponsible citizen
အစိုးရစစ်သားများ ကလေးမိခင်တစ်ဦးအား အဓ္ဓမပြုကျင့်၍ သတ်ရန်ကြိုးစား
On September 28, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ရှမ်းမြောက် ကွတ်ခိုင်မြို့ အနီးတွင် လုံခြုံရေးယူနေသော မြန်မာစစ်သား တစ်ဦး။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း KIA တပ်မဟာ (၄) လက်အောက် တပ်ရင်း (၈) နယ်မြေ အောင်နန်းကျေးရွာမှ အသက် (၂၉) နှစ်အရွယ် ကလေးမိခင်တစ်ဦးကို မြန်မာအစိုးရစစ်သားများသည် နေအိမ်သို့ဝင်ရောက်ကာ အဓ္ဓမပြုကျင့်၍ သတ်ဖြတ်ရန်ကြံစည်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများပြောသည်။
အဆိုပါကလေး ၃ယောက် မိခင်ဖြစ်သော ရှမ်းအမျိုးသမီးသည် နေအိမ်တွင်း အ၀တ်လျှော်နေစဉ် အစိုးရစစ်သား ၃ ဦး ၀င်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သတ်ရန်ကြိုးစားနေချိန် ၄င်း၏အမျိုးသား ပြန်လာသောကြောင့် အသက်လွှတ်သွားခဲ့ရကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးပြောသည်။
“အဲဒီမိန်းကလေးက ကလေးမွေးတာ ၁ လကျော်ပဲရှိသေးတယ်။ သူကအိမ်နောက်ဖက်မှာ ကလေးအနှီး လျှော်နေတယ်တဲ့။ အဲဒီမှာပဲ အဓ္ဓမပြုကျင့်ပြီးတော့ လေပင်းညစ်သတ်နေတဲ့အချိန် သူ့ယောင်္ကျားပြန်လာတာနဲ့ တွေ့တော့ ပြန်ထွက်ပြေးသွားကြတယ်တဲ့။”
ထိုသို့ဝင်ရောက်လာသော အစိုးရစစ်သား ၃ ဦးသည် ဗိုလ်ကြီး ထွန်းထွန်းနိုင် ဦးဆောင်သော နမ္မတူ (Namtu) အခြေစိုက် ခလရ (၂၄၇)မှ စစ်သားများဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများပြောသည်။
Friday, September 28, 2012 Posted by သျှမ်းသံတော်ဆင့်
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအတွင်းလှုပ်ရှားနေသည့် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA သွားလာလှုပ်ရှားရာလမ်း တလျှောက် အစိုးရတပ်က နောက်ယောက်ခံလိုက်နေကြောင်း ဒေသအတွင်းတပ်မှူးတဦးများက ပြောပါသည်။
“စက်တင်္ဘာ ၇ ရက်နေ့ ဆားတောမှာ ဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲက အစိုးရတပ် ၁၀ ယောက် လောက်ကျတယ်။ သေနတ်နှစ်လက်ရှုံးတယ်။ အဲဒါ ပြန် ၏ပေးလိုက်ပြီ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့နောက်ကို နောက်ယောင်ခံ လိုက်နေတုန်း၊ လူထုတွေကိုလဲပြောတယ်၊ သူပုန်တွေကို အထောက်အပံ့မပေးဖို့လဲ လူထုကိုတားမြစ်ထား တယ်။ ဘာသဘောလဲမသိဘူး” – ဒေသအတွင်းလှုပ်ရှားသည့် တပ်မှူးတဦးကပြောပါသည်။
ယခုလဆန်းပိုင်းမှစဉ် မိုင်းကိုင်၊ ရပ်စောက်၊ ကျေးသီး နှင့် သီပေါမြို့နယ်အကြား နယ်မြေအတွင်း လှုပ်ရှားနေ သော သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA တပ်ဖွဲ့နောက် အစိုးရတပ် ခလရ ၁၃၁ နှင့် ခလရ ၂၉၂ က နောက် ယောက်ခံ လိုက်နေကြောင်း၊ တိုက်ပွဲမဖြစ်စေရန် အထူးရှောင်ရှားမှုပြုနေရကြောင်း၊ အပစ်မရပ်စဉ်ကာလနှင့် အခြေအနေ ဘ၀ တူနေကြောင်း၊ ဒေသခံလူထုလည်း ထို့နည်းတူ စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်ခံနေရဆဲဖြစ်ကြောင်း – ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့နောက်ကို ဒီတိုင်းလိုက်နေရင်တော့ ကျနော်တို့ သည်းညီးခံတော့မှာမဟုတ်ဘူး၊ ၇ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားတဲ့ တိုက်ပွဲကလည်း ကျနော်တို့ကို ဘာညာမပြောဘဲနဲ့ ဘလိုင်းကြီး လာတိုက်တာ” – ဟု တပ်မှူးနောက် တဦးက ပြောပါသည်။
သျှမ်းပြည်တပ်မတော် နှင့် အစိုးရတပ်တို့ အပစ်ရပ် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ပြီးကြောင်း ကြားသိရစဉ် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း၊ မိမိဝမ်းရေးအတွက် သွားလာလှုပ်ရှား လုပ်ကိုင်စားသောက်ရေးလွယ်ကူ လိမ့်မည် ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်း၊ သို့သော် ယခု တစ်ပြည့်တော့မည်ဖြစ်သော်လည်း အဘက်ဘက်ကိုကြောက်ရွံ့နေရဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံအကြီးအကဲ တဦးကလည်းပြောပြပါသည်။
သျှမ်းပြည်တပ်မတော် နှစ်ဖွဲ့လုံးနှင့် မြန်မာအစိုးရတို့သည် အပစ်ရပ်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက် နေပြီ၊ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဦးတည်နေပြီ ဟုဆိုသော်ငြားလည်း မြန်မာအစိုးရတပ်က သဘောတူညီမှု ချိုး ဖေါက်၍ တောတောင်အတွင်းလှုပ်ရှားနေသောကြောင့် တိုက်ပွဲ ပေါင်း ၃၄ ထက်မနည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ရကြောင်း သျှမ်းပြည်တပ်မတော်ခေါင်း ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ်က သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောပြပါသည်။
UNFC Chairman Letter to President, U Thein Sein-Subject: Request for Negotiation to Resolve Political Problems
On September 28, 2012 September 28, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Letter Nr. Na/ PaKaBa – 50 / 2012
Date: 27/ 09/ 2012
His Excellency President U Thein Sein
Government of the Union of Burma (Myanmar)
Subject: Request for Negotiation to Resolve Political Problems
Our United Nationalities Federal Council (UNFC) has been studying critically your work programs and reforms for the emergence of peace, stability, progress and the democratic system in the country. We presume that you are undertaking reforms with noble intentions for the country and the people.
Though we do not have any criticism against the democratic changes made in the political reform process carried by the government under your leadership, we find that there are programs, without fairness and equality, in the procedure for establishment of understanding and unity with the armed ethnic resistance organizations. For the rectification of those programs in time and withaview to the interest of the country and the people, we would like to submit work programs for peace, which bear equality and justice, and which are acceptable to us. Continue reading “UNFC Chairman Letter to President, U Thein Sein-Subject: Request for Negotiation to Resolve Political Problems” →
Burma Democratic Concern (BDC) would like to question why Buddhist Monks are not included in the Arakan Investigation Commission
‎”Even though Buddhists represent more than 90% of the 60 millions Burmese populations, the Burma Democratic Concern (BDC) would like to question why Buddhist Monks are not included in the Arakan Investigation Commission even though representatives from all major religious leaders such as Muslims, Christians and Hindus included in it”. Burma Democratic Concern (BDC)